Khuphela ikhalenda yakho ngo-2019 mahala | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iikhalenda zamahhala zango-2019
UJudit Murcia | | Izibonelelo
I 2019 kwaye nangona kusekho inyanga kunye nentwana eseleyo, izitrato zigcwele yiKrisimesi kwaye zisenza ukuba sicinge unyaka omtsha ukuba ube malunga.
Kusele into encinci ukugqiba lo nyaka we-2018 kwaye ukuze ungangxami sifuna ikunike izibonelelo ezikunceda ukuba uhambe ngenyawo lasekunene lo uzayo ka-2019. Zonke zisimahla, ke khetha eyona uyithandayo.
1 Ubeko kunye nefomathi
2 Khuphela iwebhusayithi
3 Iikhalenda eziyilo oluhle
4 Iikhalenda kwifomathi yamagama
Ubeko kunye nefomathi
Kufuneka sizilungiselele ukuze inkunzi ingasibambi, kwaye sonke siyathanda ukuba nekhalenda ehlaziyiweyo ukuze sizilungiselele. Sinazo zonke iifomathi:
ukuba bambelela edongeni.
En Excel ukulungiselela iiprojekthi zethu kwikhompyuter.
ukuba ukuprinta kwaye unayo emva komnyango.
Masabelane uyilo ezahlukeneyo ke unokukhetha eyona ilungele izinto ozithandayo. Abanye babo banayo ulwandiso .ai, oko kuthetha ukuba ungahlela kunye neAdobe Illustrator. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, kule blog ungayifumana abaqeqeshiweyo ukuze ufunde ukuphatha ngokwakho.
Enkosi kwi-Intanethi, apho unokufumana khona yonke into kunye nokunye, sinokukhetha ezininzi ukufumana ikhalenda yethu kulo nyaka uzayo u-2019.
Kukho iiwebhusayithi zokukhuphela mahala Banikela ngeekhalenda zokujonga veki zonke, inyanga nenyanga. Ezi zokugqibela zezona ziqhelekileyo.
Uninzi lwamakhonkco esikunika wona ikuvumela ukukhuphela ifolda ye-zip. Kuyo siya kufumana amaxwebhu aliqela aneefomathi ezahlukeneyo: jpg, ai, eps, phakathi kwezinye iifayile.
Iikhalenda eziyilo oluhle
Olu luyilo lukhulu kakhulu namhlanje, imibala engathathi hlangothi yeetoni ezimhlophe. Kwaye nangona ingaphakathi isiNgesiSingayihlela kwifayile .ai kwaye sitshintshe igama leenyanga ngendlela elula kakhulu ucofa kabini kwisicatshulwa. Ungaya kwiwebhusayithi yokukhuphela ngokunqakraza apha.
Uyilo ngakumbi banobuhlobo kwaye banomntwana apho inyanga nganye iyi isilwanyana eyahlukileyo. Singayisebenzisa kwisikolo sabantwana abancinci okanye kubantwana bethu abancinci. Ungaya kwiwebhusayithi yokukhuphela ngokunqakraza apha.
Este ikhonkco Isalathisa kwiwebhusayithi apho unokukhuphela khona inyanga nenyaka kwifayile ye- Uyilo lweentyatyambo lwe-bohemian. la typography siskripthiOko kukuthi, ngokungathi ibhalwe ngesandla. Kububulumko kakhulu kwaye kufanelekile ukuprinta. Ukucofa apha Ndiza kukusa kwi Iqonga leGoogle Drayivu, ungayifumana phi i-cishedyuli epheleleyo, Uluhlu lweefayile ezahlukeneyo.
Iikhalenda kwifomathi yamagama
Ezi khalenda zilandelayo zininzi ngakumbi kugxilwe ekuhlelweni kweeprojekthi zomsebenzi. Ku malunga iifayile zegama ezingenanto ukuba nekhompyuter okanye uprinte. Zikulungele ukucwangciswa. Enye yeenzuzo zabo kukuba kunjalo iyahlelwa kwaye ke sinokuziqhelanisa neemfuno zethu kunye nokuthanda. cofa apha ukufikelela kwiwebhu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iikhalenda zamahhala zango-2019
Ngenaliti kunye nomgca wokufundisa ngeenkwenkwezi kubafundi bakhe ngo-1876
Umzekeliso wedijithali kaMichal Sawtyruk owenziwe ngeFotohop